❤️ Comment Augmenter le Nombre de Followers sur Instagram de Manière Organique : Tsvaga azvino otomatiki ekuita chaiko pa Instagram - Facebook
Instagram yakakurumidza kuve yesocial media powerhouse kumabhizinesi. Nezvikonzero zviri pachena : 13% de la population mondiale l’utilise, et 80% d’entre eux suivent des entreprises.
Nechiyero che4,21 % de likes, migove nemacomments, Oberlo anoti kubatanidzwa kwevatengi hakuna kumbove kwakasimba. Inofarirwa zvakapetwa kagumi pane Facebook, Pinterest uye Twitter pamwe chete.
Naizvozvo, Makambani anofunga-mberi ari kutsvaga nzira itsva dzekuita vateveri vavo ve Instagram, pasinei nematambudziko. Kuti ikubatsire kuwana zvakanyanya kubva pane ako organic uye akabhadhara ekushambadzira ekutanga uchichengetedza yako Instagram ekushambadzira matekiniki kwenguva refu., nous avons établi cette liste utile de 23 recommandations. Yasvika nguva yekuti titange mabiko.
Izvo zvakakoshawo kuti udzivise kutarisa kuedza kwako uye nguva pakuwana yako yekutanga $20,000 yekuita mari pa Instagram yako.. Update panheyo inowirirana.
Zvigadzirwa zvinofanirwa kuve zvinoshanda kana vachida kuwana vateveri vatsva uye kuwedzera kubatikana, asi vanofanira kushanda sei ? Zvidzidzo zvinoratidza kuti chinyorwa chimwe kana maviri pazuva chakanakira.
Izvo zvakakoshawo kuti udzivise kutarisa kuedza kwako uye nguva pakuwana yako yekutanga $20,000 yekuita mari pa Instagram yako.. Pane kuparidza, kupanana nyaya.
Instagram kushambadzira kushambadzira inoregeredza basa re Instagram se”graphic kukurudzira chishandiso”, kuti chii chayakagadzirirwa. Pane kungoparidza shoko rekutengesa kune vatengi vako, shandisa mifananidzo, mavhidhiyo uye zvinyorwa zvekuvakwezva.
Izvo zvakakoshawo kuti udzivise kutarisa kuedza kwako uye nguva pakuwana yako yekutanga $20,000 yekuita mari pa Instagram yako.. Gadzira zita rinozivikanwa remhando.
Mabhizinesi ari kuyedza kuvandudza yavo Instagram profiles anofanirwa kutarisa pazvinhu zvitatu zvakakosha : pachena, musiyano uye kuenderana. Nzira yekukurumidza uye isina kurongwa haizounzi chigumisiro chinodiwa.
76% yevanhu vanoti vanonyanya kuvimba nezvakagovaniswa nevanhuwo zvavo pane nemhando. Chengetedza inopindirana inoyevedza pane yako Instagram feed.
Instagram inonyanya kufarirwa pasocial network yekugovana mafoto nemavhidhiyo nekuda kwekukosha kwainoisa pane aesthetics.. Kunyangwe chokwadi chekuti kupenya kunopenya hakuchisiri mufashoni, zvinoonekwa zvemukati pa Instagram hazvifi zvakarasikirwa nekukosha kwayo.
76% yevanhu vanoti vanonyanya kuvimba nezvakagovaniswa nevanhuwo zvavo pane nemhando. Sarudza pane akakodzera hashtag ekushandisa.
Iwo ma hashtag aunoshandisa pa Instagram anogona kuita mutsauko pakati pekuita kwepamusoro positi uye positi inopera pazasi peinotevera runyorwa..
76% yevanhu vanoti vanonyanya kuvimba nezvakagovaniswa nevanhuwo zvavo pane nemhando. Tarisa pazvinhu zvinogadzirwa nemushandisi.
Instagram mushandisi-yakagadzirwa zvemukati ndiyo inoera grail yekushambadzira. Zvemukati zvinogadzirwa uye zvinotenderwa nemusika wako waunotarisisa zvisati zvaenda, iyo inobatsira kuderedza mari dzekutengesa uchiwedzera kubatanidzwa kwevatengi.
76% yevanhu vanoti vanonyanya kuvimba nezvakagovaniswa nevanhuwo zvavo pane nemhando. Ongorora akasiyana mavhidhiyo mafomati anowanikwa pa Instagram kuti uone kuti chii chinoshanda zvakanyanya kune yako brand.
Kukosha kwevhidhiyo kunodarika zvemufananidzo.
76% yevanhu vanoti vanonyanya kuvimba nezvakagovaniswa nevanhuwo zvavo pane nemhando. Shandisa mazwi akavharwa uye maturusi emazwi akavharika pa Instagram.
Maererano ne Instagram, 60 % des stories sont écoutées, tandis que 40 % sont regardées en silence.
76% yevanhu vanoti vanonyanya kuvimba nezvakagovaniswa nevanhuwo zvavo pane nemhando. Instagram reels inotenderera kumashure kana iwe ukairega.
Izvo zvakakosha kuti unzwisise akawanda mafomati ekushambadzira papuratifomu, car 75 % des Instagrammers déclarent prendre des mesures “kusanganisira kushanyira nzvimbo, Google kana taurira shamwari nezvazvo” mushure mekubatwa nechipo.
10. Shandisa Instagram's augmented real filters kune yako mukana.
Instagram's Spark AR Studio inoita kuti zvive nyore kune chero munhu kugadzira Augmented Reality Filters. Iine maonero anopfuura bhiriyoni pane mamwe mafirita makuru e Instagram kubvira ipapo, chokwadi chakawedzerwa chakanyanya kuwana simba repamusoro pachikuva.
11. Shandisa Instagram's vhidhiyo ad marudzi.
12. Animated Gif Anogona Kunakidzwa Kana Akasiiwa Kuseri.
A GIF chishandiso chikuru chezvikwata zvekushambadzira, car des études indiquent que les consommateurs sont plus enclins à regarder des vidéos de 15 secondes jusqu’au bout..
13. Wedzera webhusaiti yako traffic nekushandisa Instagram mushandisi base.
Sezvo Instagram inobvumira imwe chete inodzvanya link mubio yako, inogona kubatsira kuwedzera traffic kune yako webhusaiti.
14 Vous pouvez “kukunda” pa Instagram uchishandisa injini yekutsvaga optimization (Seo).
Instagram uye SEO zvingasaita sevanhu vanobatana navo pakutanga kuona, asi mumambure anhasi akanyanya, zvakakosha kuti yako Instagram account ine SEO hurongwa munzvimbo.
15. Shandisa micro-influencers kuti uvandudze mukurumbira webhizinesi rako
Kuburikidza ne Instagram influencer kushambadzira, zviri kuramba zvichiwanda kushandisa vatungamiriri vanofunga muindasitiri kuti vasvike kune vakawanda vateereri nemashoko ekutengeserana.
16. Ipa mubairo kumunhu anotora yakanyanya kugadzira Instagram foto.
Makwikwi inzira huru yekuwedzera kubatanidzwa kwe Instagram yako inotevera.
17. Instagram inogona kushandiswa sechishandiso chekushambadzira kuwedzera huwandu hwevanhu vanosaina yako email runyorwa.
Kana zvasvika pakuvaka hukama hwenguva refu nevatengi, email inoramba iri nzira inosarudzwa yekukurukurirana. Kushandisa Instagram gadget kunogona kukubatsira kuti uwane vateveri vakawanda vepa Instagram (application).
18. Shandisa Instagram Nhau.
Avec 500 millions d’utilisateurs quotidiens, Instagram nyaya dzakakurumidza kusimuka kusvika pakukwirira kukurumbira kwepuratifomu. Nyaya dze Instagram nyaya dzinoita kuti vamwe vafunge kuti inogona kupedzisira yatora nzvimbo yekudya kukuru.
19. Sanganisira chinongedzo kune yako Instagram Nhau mune yako mbiri.
Kare, vashandisi ve Instagram chete vakasimbiswa vanogona kuwedzera chinongedzo ” Ona zvimwe ” kunyaya dzavo, asi zvino, toute personne possédant un compte professionnel et au moins 10 000 followers peut le faire.
20. Shandisa zvakanaka maemoticons.
Emojis, zvakananga, ipa mukana pamusoro pekutaura kwemavara kana uchishandiswa pa Instagram. Muzera iro maemoticons akawanda (uye vazhinji vachauya), zvakakosha kuve nehurongwa hwekuzvishandisa hunoratidza hunhu hwebhizinesi rako pasina kunzwika zvakanyanyisa.
21. Kurudzira yako Instagram account pane mamwe masocial media mapuratifomu.
Kurudzira yako Instagram chiteshi kune vanhu vakawanda sezvinobvira. Unogona kuzviwana, Semuyenzaniso, kusanganisira chinongedzo kune yako Instagram peji mune Facebook mamiriro ekuvandudza.
22. Mugwaro rose, shandisa mafoni kuita chiito (Ctas).
Wana zvakanyanya kubva kune yako Instagram kukwidziridzwa, kunyange kana ichikosheswa zvikuru. Sanganisira kufona kwakajeka kwechiito pa Instagram.
23. Teerera kune ako anonyanya kuzivikanwa Instagram zvinyorwa uye tora manotsi ekuti ungazvivandudza sei.
Dzidza pa “formula” kuwedzera nhamba yako yevateveri pa Instagram uye kuishandisa mune yako yekusimudzira zano kuti uwane vateveri vazhinji.
Tsvaga azvino otomatiki ekuita chaiko pa InstagramMaitiro ekurodha Instagram Vhidhiyo kune Yako iPhone : Tsvaga azvino otomatiki ekuita chaiko pa Instagram
Tsvaga azvino otomatiki ekuita chaiko pa InstagramTsvaga azvino otomatiki ekuita chaiko pa Instagram